Uppdaterades 19 feb 2021 13:42
Dukamada, jiimka, hoolalka isboortiga iyo barkada dabaasha waa inay tiriyaan tirada dadka soo booqanaaya si uu qof kastaa toban mitir oo laba jibbaaran ugu helo. Waa in waxqabadyadu ay leeyihiin calaamado si cad dadka soo booqdayaasha ah ugu sheegaaya/muujineysa inta qof ee loo oggol yahay inay qolka ku jiraan isla hal waqti.
Shuruud tijaabo negatif ah/inaan la qabin covid-19 oo laga rabo dadka ajaanibka ah.
Muwaadiniinta ajaanibka ah ee 18 sanno jirka ah ama waxa ka weyn ayay guud ahaan saaran tahay xayiraad/mamnuucid soo galitaanka Iswiidhan ah haddii aanay muujin karin shahaado natiijo tijaabo muujinaysa inaan la qabin/negatif ah covid-19. Waa inay ugu badnaan 48 saacadood ay ka soo wareegeen inta u dhaxaysa marka tijaabada lagaa qaaday iyo marka xadka laga gudbaayo.
Dadka shaqada maalinkasta ugu safra iyo dadka xadka ka shaqeeya ayaa tusi kara tijaabo ugu badnaan hal todobaad ah. Waxay xeerarka cusubi kaabayaan xayiraadii soo gelitaanka ee hore ugu jirtay.
Tijaabooyinka noocan ah ayaa la ogol yahay: Tijaabooyinka hide-sidaha (Antigen), tijaabada PCR-ka iyo tijaabada LAMP-ka. Waa inuu macluumaadku ku cad yahay af Iswiidhish, Ingiriisi, Norwiiji ama Deenish.
Xayiraada ayaa saaran safarada aan muhiimka aheyn ee Iswiidhan loogaga imanaayo wadamada ka baxsan Midowga Yurub. Waxay xayiraadu shaqeynaysaa ilaa 31 Maarso 2021.
Muwaadiniinta Iswiidhishka ah iyo muwaadiniinta dalalka kale oo Midowga Yurub/EES ayaanay khuseynin mamnuucida soo gelitaanku. Waxa xitaa sidoo kale jira waxyaabo kale oo badan oo ka reeban mamnuucida soo gelitaanka, taas oo ay ka mid yihiin haddii wadamada qaar loo arko inay leeyihiin khatar yar oo faafitaanka fayruska ah. Dadka ku nool dalalkaas ka reeban ayaa Iswiidhan u soo safri kara haddii ay tusaan tijaabin covid-19 ah oo muujinaysa inaan la qabin/negatif ah.
Waxa taas laga reebi doono waxa ka mid ah, sida:
Qofka ka shaqeeya ama ku nool Iswiidhan oo loo oggolaanaayo inuu Danmark ka soo safro.
Carruurta u soo safreysa si ay waalid ku nool Iswidhan ula kulmaan iyo cidda carruurta wadda.
Qofka la socda/la safraaya gaadiidka daryeelka caafimaadka iyo bukaanka.
Dadka ajaanibka ah ee waa inay sidoo kale tusi karaan natiijo tijaabo oo muujinaysa inaan la qabin/negatif ah ka hor inta aan loo oggolaan inay Iswiidhan soo galaan.
Waxa boqortooyada Ingiriiska, Koonfur Afrika, Baraasiil iyo Norway ka jira noocyo cusub oo fayruska covid-19 keena. Haddii aad dhowaan joogtay mid ka mid ah wadamadaas waa inaad:
Talooyinka loo soo jeedinaayo qofka ka soo safraaya ama ka soo safray wadamada leh nooca fayruska ee cusub (ku qoran af Iswiidhish)